UNPO: Oromo: OLF and ULFO Merge
In late September, the Oromo Liberation Front (OLF) and the United Liberation Forces of Oromia (ULOF) decided to work together for the common aim of the self-determination of Oromo people. The two organisations signed the agreement on 14 September following a series of meetings to determine common goals and strategies to better represent Oromos in the Ethiopian political configuration. In signing the agreement, both OLF and ULFO called upon Oromo organisations to pool their resources and defined Oromo national interests as the core of their agenda. The merged front is provisionally named OLF.
The article below was published by The Reporter:
The two organizations also call upon all Oromo political organizations to work together to respond to the demands of the Oromo people, and further stated that “issue of struggling for Oromo national interests be our core objective; and that we endeavour to promote the unity that the Oromo people have for so long aspired; and we call upon all Oromo political organizations to equally respond to the demand of our people”.